महिनावारी हुदा धेरै रगत बग्छ, के यो समस्या हो ? – Rastriyapatrika
महिनावारी हुदा धेरै रगत बग्छ, के यो समस्या हो ?
महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यस सम्बन्धि उचित ज्ञान नपाउँदा र ध्यान नदिँदा कतिपयका लागि समस्या बनिरहेको छ । जसले गर्दा कति महिला शाररिक रुपमा मात्रै होइन, मानसिक रुपमा पनि पीडा खेपिरहेका छन् । कतिपयले यस बारेमा उचित ज्ञान नपाएर प्रशस्त भ्रम पालेका छन् भने कतिपयले हेलचक्र्याइँ गर्ने गरेका छन् । दुवै कार्य स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् ।
पछिल्लो समय हर्माेनजन्य औषधिको प्रयोग गर्ने महिला बढेका छन् । जसका कारण पनि मासिक धर्ममा तलमाथि परिरहेको छ । समस्या आइरहेका छन् । कतिपयले महिनावारीसँग सम्बन्धित भएर आउने समस्यालाई लाजका विषय बनाउँदा जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेका छन् । महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्या, भ्रम र यसबाट मुक्ति पाउने उपाय यसप्रकार छन् ।
हानिकारक हुने थाहा पाएर पनि प्रयोग गर्नेको सँख्या बढेको पाइन्छ । त्यसैले विशेषज्ञ अग्रवाल स्पष्ट पार्न चाहन्छिन्, ‘यो औषधि हर्माेनको चक्की हो र महिला महिनावारी हुुनु भनेको पनि हर्मोनको परिवर्तन नै हो । त्यसैले यसले शरीरमा असर गर्दछ ।’ डा अग्रवालले यस्ता औषधीलाई महिनावारी तलमाथि पार्न सक्दो प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन् ।
महिनावारी समयमै नभएको गुनासो गर्ने महिलाको सँख्या दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । नियमित समयमा महिनावारी नहुनुको कारणमा हर्मोनको असन्तुलन एक भएको डा अग्रवालले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘शरीरमा हुने इन्ड्रोक्रााइन ग्ल्यान्डले उत्सर्जन गर्ने हर्मोनले महिनावारी समयमै गराउने गर्दछ । यसरी उत्सर्जन हुने हर्मोनको सन्तुलन बिग्रियो भने महिनावारी गडबड हुन्छ ।’
सरसफाईको महत्व जताततै छ । महिनावारीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । महिनावारी भएको समयमा संक्रमण हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । डा ज्योति अग्रवालका अनुसार रगत यस्तो माध्यम हो, जसमा जिवाणु छिटो हुर्किने गर्दछन् । लगातार रगत बगिरहेको छ तर सरसफई छैन भने जिवाणुहरु योनीमार्ग हुँदै पाठेघरसम्म पुग्न सक्छन् । जसबाट संक्रमण हुने गर्दछ ।
किशोरा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेकी बालिकालाई महिनावारी सम्बन्धी जानकारी दिन एकदम जरुरी ठान्छिन् डा अग्रवाल । ‘महिनावारीका बारेमा शारिरीक मात्रै होइन, मानसिक हिसावले पनि परिपक्क बनाउनु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यस सम्बन्धि ज्ञान किशोरा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेकी छोरीलाई दिन आवश्यक छ ।’ उनीहरुलाई महिनावारी सम्बन्धी प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हेर्न लगाउने गर्नुपर्छ । रजस्वला जुनसुकै समयमा पनि हुन सक्ने भएकाले विद्यालयका मिसहरुलाई लाज नमानी त्यसको बारेमा बताउने तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ ।